यतिखेर स्थानीय निर्वाचन २०७९ को मौन अवधि छ । देश–विदेशमा रहेकाहरू भोट खसाल्नका लागि गाउँ फर्किएका छन् । आफ्नो वडा, पालिकाका प्रतिनिधि चुन्न नागरिक आ–आफ्नो पालिका फर्केका हुन् । यसरी फर्कनेहरू आजै गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ । देशका विभिन्न शहरबाट गाडी रिजर्भ गरेरै पनि गाउँ फर्कनेहरूको भिड देख्न सकिन्छ ।
देश चुनावमय भइरहेको वेला ज्याला–मजदूरी गरी दैनिक गुजारा चलाउनेहरूलाई भने चुनावी माहोलले छोएको देखिएन । न त उनीहरूलाई भोट खसाल्न जाने हतारो नै देखिन्थ्यो । उनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म नियमित दैनिकीमै व्यस्त छन् ।
मौन अवधि शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन कालिमाटीको लामपाटी सडकमा सयौं गाडी ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । कयौं पटक उक्त सडक हुँदै विभिन्न पार्टीका र्‍याली, जुलुसहरू आए/गए । त्यही सडकको छेउमा हातमा बेल्चा लिएर बालुवा ओसार्दै हुनुहुन्थ्यो गणेश कार्की । वैशाखको चर्को घाममा खलखली पसिना चुहाउँदै काम गरिरहनुभएका गणेशलाई यस्ता र्‍याली, नाराजुलुसले छोएनन् । एकैछिन कम्मर सोझ्याएर हेर्नुहुन्छ अनि फेरि काममै लाग्नुु हुन्छ । मंगलबार काम गरिरहेको स्थानमा भेटिनुभएका गणेशसँग हामीले एकैछिन कुराकानी गर्ने समय माग्यौं । उहाँ कुरा गर्न तयार हुनुभयो । गणेशको घर सिन्धुलीको कमलामाइ नगरपालिकामा रहेछ । सबैभन्दा पहिले गणेशलाई ‘चुनावमा भोट हाल्न गाउँ जानुहुन्न ?’ भनेर सोध्यौं । निधारको पसिना पुछ्दै भन्नुभयो, “गाउँ गएर के गर्नु ! एक दिन काम नगरे ८ सय घाटा हुन्छ । त्यो पैसा हामीलाई कसले दिन्छ ?”
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने गणेश मिस्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले यो पेशामा जीवनका तीन दशक बिताइसक्नुभयो । अहिले पनि काम निरन्तर छ । उहाँ भन्नुन्छ, “के दशैं–तिहार, के चुनाव ! काम छोडेर गाउँ जानै गाह्रो हुन्छ । दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेलाई समय नै नमिल्दो रहेछ ।”
५३ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा गणेशले दुई पटक मात्र भोट खसाल्नुभएको छ २०४६ र २०५४ सालमा । २०६३ सालमा काठमाडौं छिरेदेखि यतै काममा व्यस्त हुनुभयो । भोट खसाल्नको लागि निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्दछ । उहाँलाई आफ्नो नाम छ कि छैन भन्ने थाहा छैन । “पहिले एक/दुई पटक त भोट दिएकै थिएँ । त्यसपछि भोट हाल्न के–के नियम ल्याएको छ रे । यो विषयमा न मैले कसैलाई सोधें, न त कसैले भन्यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
गणेशले यही पेशाबाट तीन छोरा र श्रीमतीको पालनपोषण गर्नुभयो । अहिले छोराहरू ठूला भइसके । दुई जना काठमाडौंमा गाडी चलाउनुहुन्छ भने एउटा छोरा विदेशमा हुनुहुन्छ । गणेशलाई आफ्नै देशमा पसिना बगाउन पाएकोमा गर्व लाग्छ । “राम्रो काम गर्नको लागि न पढेलेखेको छु न केही । यही काम गर्र्दा पनि मासिक ४० हजार जति आइहाल्छ । विदेश जानु परेन । आफ्नै देशमा काम गर्न पाउँदा सन्तुष्ट छुँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँलाई न कसैलाई जिताउनुपर्छ भन्ने छ न कसैले मेरो लागि यो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्छ । त्यसैले चुनावको माहोल जतिसुकै तातिओस् उहाँ आफ्नै काममा मस्त हुनुहुन्छ ।
संखुवासभाका नर्वु शेर्पा पनि उहाँसँगै इट्टा बोक्ने, बालुवा बोक्ने काम गर्नुहुन्छ । नर्वु २० वर्ष पुग्नुभयो । उहाँसँगैका साथीहरू गाउँमा चुनावको र्‍याली जुलुसमा सहभागी भइरहेका छन् । नेताहरूसँग घरघर प्रचारप्रसारमा लागेका छन् तर, नर्वुलाई भने चुनावबारे कुनै चासो छैन । “चुनावबारे मलाई केही थाहा छैन । आज के काम गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ । यस बाहेक देशमा के भइरहेको छ भन्ने मलाई जानकारी हुँदैन,” मंगलबार नेपालमतसँगको भेटमा नर्वुले भन्नुभयो ।
१६ वर्षको उमेरमा संखुवासभाबाट काम खोज्दै काठमाडौं आउनुभएका उहाँले यो काम गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षसम्म उहाँ एक पटक पनि घर जानुभएको छैन । नेपालमतसँगको कुराकानीमा नर्वु भन्नुहुन्छ, “६ कक्षा पढ्दापढ्दै पढाइ छोड्नुपर्‍यो । गाउँमा केही काम पाइँदैन । यो काममा दुःख भए पनि पेटभरि खाना त पाइन्छ । कामकै कारण घर जान चाहिं पाएको छैन, कहिलेकाहीं पैसा पठाइदिन्छु । बाँकी यस्तै त हो । काम गर्‍यो, बस्यो, खायो ।”
नर्वुसँग नागरिकता छैन । नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने समेत उहाँलाई थाहा छैन । “यो काम गर्न नागरिकता चाहिँदैन । अरू काम गरेको छैन । नागरिकता बनाउनुपर्छ भनेर कता–कता सुनेको थिएँ तर बनाएको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नर्वु र गणेश जस्ता हजारौं युवालाई न त चुनावी रौनकले छोएको छ न त उम्मेदवारहरूको घोषणापत्रले नै । चुनावबारे चासो नै नभएका उहाँहरू न भोट हाल्न गाउँ जाने तयारीमा हुनुहुन्छ न जनप्रतिनिधिको बारेमा थाहा नै छ ।
सर्लाहीको मानपुरका राजेश राय कलंकीमा केरा व्यापार गर्नु हुन्छ । बिहान बल्खु गएर केरा ल्याउने र दिउँसो कलंकीमा आएर सडकमा बसी केरा बेच्न थालेको १२ वर्ष भइसक्यो । राजेशलाई चुनावको बारेमा थाहा छ तर घर जाने फुर्सद छैन । छोराछोरी र श्रमती सहित काठमाडौंमा बस्दै आउनुभएका उहाँ भन्नुहुन्छ, “श्रीमती केरा बेच्दै बस्छे । म चाहिं कहिले भारी बोक्ने, कहिले सिरक–डस्ना बनाउने काम गर्छु । जे भेटियो त्यही काम गर्ने हामी जस्तालाई हत्तपत्त गाउँ जान समस्या छ ।”
धादिङका भीम लम्सालको पनि भोलि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट खसाल्न गाउँ जाने योजना छैन । चस्मा, घडी बोक्दै सडकमा डुलेर व्यापार गर्ने उहाँ गाउँमा जाँदा काममा समस्या पर्ने भएकाले नजाने बताउनुहुन्छ ।
सात वर्षदेखि कलंकी चोकमा बसी व्यापार गर्दै आउनुभएका उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुनावमा भोट दिनको लागि काम छोडेर गयो । पछिल्लो दिन भात खान पनि धौ हुन्छ । आखिर जसलाई भोट दिएर जिताए पनि हाम्रो दुःख उस्तै हो ।”
दैनिक ज्याला–मजदूरी गरी खाने हजारौंको कथा यस्तै छ । उनीहरू धेरैलाई चुनावले छोएको छैन । छोओस् पनि कसरी ! चुनावअघि भोट माग्ने क्रममा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू चुनाव जितेपछि आफ्नो स्वार्थ बाहेक अन्त हेर्दैनन् ।
प्रकाशित: Thursday, May 12, 2022 | 10:24:00 बिहीबार, २९ बैशाख, २०७९